ဘယ်မှာ Pamir? နှင့်လူမျိုးနှင့်ပြည်သားမြို့သားတို့သလော | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
В помирандии, а страну населяют соотвественно памиранцы — это сразу за центральной библиотекой и полкой под наименование "география"!
Народы Памира объединяются термином припамирские народности. Это ваханцы, ишкашимцы, шугнанцы, рушанцы, баджуйцы, бартангцы, язгулемцы, зебагцы, сангличи, сарыкольцы и др. Вероисповедание — мусульмане-исмаилиты. Основные языки общения между представителями разных народностей — шугнанский и таджикский.
Памир — горная система в Средней Азии, главным образом в Таджикистане (Горный Бадахшан) ; восточная и южная части в пределах Китая и Афганистана. Высшая точка вершина Конгур в Кашгарском хребте, на востоке Памира (7719м) . Западный Памир резко расчленен глубокими ущельями рек. Восточный Памир имеет сглаженный рельеф; плоские днища долин и котловин на высоте 3500-4500 м, хребты достигают 6000 м и более. Площадь оледенения (в границах Таджикистана) свыше 7500 кв. км, крупнейшие ледники: Федченко (самый крупный высокогорный в мире) и Грумм-Гржимайло. В Восточном Памире преобладают высокогорные пустыни, в Западном Памире участки степей. На территории бывшего СССР на Памире —3семитысячника (пик Коммунизма, пик Корженевской, пик Ленина)
ဂြိုဟ်တုပုံရိပ် Pamir တစ်အသိအ၏ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ အလွန်အမင်းမြင့်မားသောကုန်းမြင့်ဒေသ၏ဝိသေသအင်္ဂါရပ်။
1 Zaalai လီနင်အထွတ်အထိပ် (7134) အထွတ်အထိပ် Dzerzhinsky (6717), Kyzylagyn (6683)
ကွန်မြူနစ် Peak ၏သိပ္ပံ2အကယ်ဒမီ (7495) Korzhenevskaya (7105), ထိပ်ကရုရှား (6875)
3 Shahdarinsky အထွတ်အထိပ်မာ့က်စ (6723) အိန်ဂျယ်အထွတ်အထိပ် (6507)
4 Wakhan နှင်း COB (6421) ။
5 Kingtau Budunseltau (6220) Aksaybashi (6146)
6 Ulugarttag Chakragil (6760) အရှေ့။ Chakragil (6445), 6330 အထွတ်အထိပ်
7 Kongurmuztag Kongur (7719) Kongurtyube (7595), Muztag ATA (7546)
8 Sarykol Lyavirdyr (6316) အနီရောင် Peak Komandirov (5821)
9 ပေတရုသည်အထွတ်အထိပ်ကွန်မြူနစ် (7495) အထွတ်အထိပ်မော်စကို (6785)
10 Darvazsky Garmo (6602) Arnavad (5992)
11 Vanj အထွတ်အထိပ် 5603 အမြင့် Yazgulem (5588)
12 Yazgulem အထွတ်အထိပ်တော်လှန်ရေး (6940) အထွတ်အထိပ် 26 မိနစ် Bakinskih Commissars (6848)
13 Rushansky အထွတ်အထိပ် Pathor (6083) အထွတ်အထိပ် 5939
14 Shugnan အထွတ်အထိပ် Peak (5707) ။
15 Ishkashim အထွတ်အထိပ် Mayakovsky (6095) ။
16 Zulumart အောက်တိုဘာလအထွတ်အထိပ် (6780) အထွတ်အထိပ် 6290, Vera အထွတ်အထိပ် Slutskoj (5925)
17 Saukdara အထွတ်အထိပ် Beleuli (6065) ။
18 Tanymas အထွတ်အထိပ် Gorbunova (6030) ရုတ်တရက်ရေနံတူးစင် (6018), Belyandkiik (5946)
19 Muzkol အထွတ်အထိပ်ဆိုဗီယက်အရာရှိ (6233) ကို Double-ခေါင်းနှစ်လုံးအထွတ်အထိပ် (6148), ထိုင်တော်မူ၏။ Muzkol (6128)
20 5440 Pshart အထွတ်အထိပ်အထွတ်အထိပ် Kiyazek (5401)
21 မြောက်အမေရိက Alichur Peak Sarez (5981) Peak 5936, Kulin (5931)
22 တောင်ပိုင်း Alichur Kyzyldangi (5704) ။
23 Bogchigir Bogchigir (5716) ။
24 Muztag-Sarykol 5821 အထွတ်အထိပ်။
အဘယ်သူမျှမ, Tajikistan သာရှိသေး၏။ Pamir တောင်တန်း (system ကိုထိုကဲ့သို့သော) အများအားဖြင့် Tajikistan နဲ့ကာဂျစ္စတန်မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့နဲ့တောင်အာရှ Pamir မာဂျင်တရုတ်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
Памир — горная система на юге Средней Азии, на территории #8203;Таджикистана. население- памирцы
Памир — это в Таджикистане. Населяют таджики. Есть такое понятие "памирские таджики".
လူမျိုးများ: Uzbek အာဖဂန်ကိုတော့တာဂျစ်လူမျိုးတွေကတရုတ်
Posted in, ကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်လည်